အဲဒိုဗေဒါ ● ရန်သူမရှိ၊ မိတ်ဆွေသာရှိ ... - MoeMaKa Media
Home / Community / Edo Vader / အဲဒိုဗေဒါ ● ရန်သူမရှိ၊ မိတ်ဆွေသာရှိ ...
အဲဒိုဗေဒါ ● ရန်သူမရှိ၊ မိတ်ဆွေသာရှိ ...
Community, Edo Vader
(မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၉
နိုင်ငံရေးလောကမှာ ဆိုရိုး ၁ ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ရန်သူမရှိ၊ မိတ်ဆွေသာရှိ ဆိုတဲ့စကားပါ။ အစကတော့ အဲ့ဒါကို နားမလည်ခဲ့ဘူး။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းကြောင့်လည်း ပါမယ်ထင်တယ်။
ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းက သူသေ၊ ကိုယ်သေ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်ခဲ့တာကိုး။ ဒီတော့ တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ အတိုက်အခံမှန်သမျှဟာ ရန်သူလို့ပဲ မြင်မိတာပေါ့။ နောက်ပိုင်းမှသာ ဒီစကားကို ကျနော် နားလည်သွားတာပါ။
ကျနော် ၁၀ တန်းအောင်တော့ အနုပညာတက္ကသိုလ်မှာ ဝင်ခွင့်လာဖြေရတယ်။ ခေါ်မှာက ၁ မေဂျာမှာ ၅၀ ယောက်ပဲ ခေါ် မှာ။ လာဖြေတာက အယောက် ၂၀၀ ကျော်တယ်။ အဲ့ဒီတော့ အယောက် ၁၅၀ ကျော်က ပြုတ်မယ့်သဘောရှိတာပေါ့။
လက်တွေ့ဆွဲပြကြပြီးတဲ့နောက် တယောက်ချင်း အင်တာဗျူးဖြေဖို့အတွက် အပြင်မှာ စောင့်နေကြရတယ်။ စောင့်နေကြရင်း ခုမှ တွေ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘာတွေမေးလာရင် ဘယ်လိုဖြေရမလဲ ဆိုတာတွေ ဖလှယ်ကြတာပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ လာဖြေတဲ့ သူတွေအချင်းချင်း တယောက်နဲ့တယောက် လိုက်နှုတ်ဆက်ကြရင်းနဲ့ ကောင်မလေး တယောက်က နင်တို့က ဘယ်မေဂျာ လျှောက်တာလဲတဲ့။ သူက ပန်းချီတဲ့။ အဲ့ဒါနဲ့ ငါတို့လည်း ပန်းချီမေဂျာလျှောက်ထားတာပဲဆိုတော့.. သူက ချက်ချင်းပဲဟာ... ရန်သူ၊ ရန်သူတဲ့။
အားကစားတွေမှာ ကြည့်လိုက်ရင် ပထမဆုရတဲ့သူက တယောက်ပဲ ရှိမှာပါ။ ၂ ဖွဲ့ပြိုင်တဲ့အခါ ၁ ဖွဲ့ကတော့ ရှုံးရမှာပဲ။ ၁၀ နိုင်ငံ ပြိုင်ရင် ၉ နိုင်ငံက ရှုံးရမှာ ထုံးစံပဲလေ။ ၁ ယောက်မှ မရှုံးရင် ၁ ယောက်မှလည်း မနိုင်ဘူးပေါ့။ ဒီတော့ စဉ်းစားကြည့်ရမှာက ပြိုင်ဖက်တွေက ရန်သူတွေလား??
ခု Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲတွေကို တချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်။ Myanmar Idol Season တွေမှာဆို တဖွဲ့ပြိုင်ရင် ၈ ယောက် လောက်မှာ ၄ ယောက်က သေချာပေါက်ပြုတ်ကြရတယ်။ ဒီတော့ သူများပြုတ်မှ ကိုယ်ကတက်မှာလို့တွေးပြီး သူများပြုတ် အောင် ဆုတောင်းပြီး ပြိုင်ကြသလား?? ကိုယ်အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်ရမယ်လို့တွေးပြီး ယှဉ်ပြိုင်ကြသလား?? သူများပြုတ် ပါစေလို့ ဆုတောင်းတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် မရှိတာတော့ သေချာပါတယ်။ ကြည့်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း နိုင်သွားသူတွေအတွက် မုဒိတာပွားကြသလိုပဲ ပြုတ်သွားကြတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီး ဝမ်းနည်းကြရတာပဲ။ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်နိုင်လို့ ပျော်နေတဲ့ကြတာထက် ပြုတ်သွားတဲ့သူတွေအတွက် ငိုကြရတယ် မဟုတ်လား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့အချင်းချင်းက ပြိုင်ဖက်တွေဆိုပေမယ့် တခရီးတည်းသွား မိတ်ဆွေတွေလေ။
Aung La N Sang နဲ့ Vera ထိုးသတ်ကြတယ်။ Aung La ကိုနိုင်စေချင်တော့ Vera ကိုမုန်းကြတယ်။ Vera ရှုံးတော့ ပျော်ကြ တယ်။ အဲ့ဒီမှာ တခုသတိထားမိတာက Aung La ကို ဂုဏ်ပြုတာထက် Vera ကို သွားဆဲကြတဲ့သူတွေက များနေတာပဲ။ ကိုယ့်လူနိုင်လို့ ပျော်တာထက် သူများရှုံးလို့ ဝမ်းသာနေသလို ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ အဲ့ဒီမှာ Aung La ပြောသွားတာလေးကို အဲ့ဒီလူတွေ နားထောင်စေချင်တယ်။ Vera ကိုနိုင်သွားတော့ ထူးထူးခြားခြားပျော်ပြီး အောင်ပွဲခံတာ မတွေ့ရတာ ဘာဖြစ် လို့လဲ..လို့ မီဒီယာတွေက မေးကြတဲ့အခါမှာ.. ကျနော်က လေ့ကျင့်ရေးရော၊ ဗျူဟာရော သေချာပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်လို့ Vera ကိုနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပြီးသား ဖြစ်တယ်တဲ့။ ပြီးတော့ Vera က သူ့မိသားစုအတွက် ဒီပညာရပ်နဲ့ ထိုးသတ်ပြီး ရပ်တည်နေတာ။ ကျနော်ကလည်း ကျနော့်မိသားစုအတွက် ဒီပညာရပ်နဲ့ ရပ်တည်နေတာ။ ကျနော်တို့တတွေက စင်ပေါ်မှာ ပြိုင်ဖက်တွေဆို ပေမယ့် ပွဲပြီးသွားရင် မိတ်တွေတွေပါပဲတဲ့။ အရမ်းကြီးအောင်ပွဲခံဖို့ မလိုအပ်ပါဘူးတဲ့။
ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာလည်း အရင်က သမိုင်းကောင်းခဲ့ဖူးတဲ့ လမ်းဟောင်းတွေကို ပြန်ပြီး တူးဖော်နေကြရတဲ့ ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ Film လောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Animation လောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Comic လောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တဦးနဲ့တဦး၊ တဖွဲ့နဲ့ တဖွဲ့ တိုက်ခိုက်နေဖို့၊ ရှုံ့ချနေဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒီအချိန်မှာ ဘယ်သူ တဦးတယောက်မှ ကျရှုံးသွားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ အားလုံးက လမ်းအတူတူဖောက်နေကြဆဲ မိတ်ဆွေတွေပါပဲ။
Olympic Games မှာ Table Tennis ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကို တရုတ်နိုင်ငံကချည်းပဲ ရွှေတံဆိပ်တွေ သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အခါ တရုတ်အားကစား ဝန်ကြီးက ဘာပြောတယ် ထင်ပါသလဲ။ "ဒီလိုသာ ပြိုင်သမျှ Table Tennis ပွဲတွေအားလုံးကို တနိုင်ငံတည်း ကပဲ ဆုတွေရနေမယ်ဆိုရင် Table Tennis အားကစားရဲ့ရှေ့ရေးဟာ စိုးရိမ်ဖွယ်ဖြစ်လာမယ်" လို့ ပြောသွားတာပါ။
Apple ကျရှုံးခဲ့စဉ်တုန်းက ဒေဝါလီခံရခါနီးမှာ ရှယ်ယာအများစုကိုဝယ်ပြီး ကူညီခဲ့တဲ့သူဟာ.. သူ့ရဲ့အကြီးဆုံးပြိုင်ဖက် Microsoft ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အကုန်လုံးလည်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ပြိုင်ဖက်မရှိရင် အကောင်းဆုံးဆိုတာလည်း ရှိမလာပါဘူး။
အဲဒိုဗေဒါ ● ရန်သူမရှိ၊ မိတ်ဆွေသာရှိ ... Reviewed by Aung Htet on 9:45 AM Rating: 5